आश्विन ५ गते, २०७६ आइतवार
22nd September, 2019 Sun १७:५७:४९ मा प्रकाशित
चीन संसारको दोस्रो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । यहि हिसावले केहि समय अर्थात् दश वर्षभित्र चीन पहिलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्ने प्रोजेक्सन गरिदै छ । चीनलाई तथ्य र तत्थ्याङकको आधारमा हेर्दा दोस्रो अर्थतन्त्रकोरुपमा विश्लेषण गरियो यसलाई म अलिकति संशोधन गर्न चाहन्छु । मकाओ, हङकङ र ताइवानको अर्थतन्त्रलाई जोड्ने हो भने चाइना र अमेरिकाबीच खासै त्यति भिन्नता छैन । सामान्यरुपले हेर्दा चाइना र अमेरिकाबीच जम्मा ६/७ ट्रिलियन डलरको मात्र फरक छ । चीनले अहिलेकै विकास गति ६.७ प्रतिशतले प्रति वर्ष आर्थिक बृदिदर हाँसिल गर्न सक्यो भने प्रति वर्ष ५ सय बीस डलर प्रतिव्यक्ति आयले अर्थतन्त्र विकास हुन जान्छ ।
यस्तै एउटा कविले लेखेको प्राचिन कविता छ । बीस बाइस वर्षको उमेरमा राजाका सेना आएर सेनामा भर्ति हुन भन्छन् । सेनामा भर्ति भएर जादा लडाइमा जानु पर्ने । लडाइबाट फर्किने चान्सेस छैन । त्यस्तो अवस्थाम गोलिको मुखमा किन पर्ने ? बाच्न त सित्तैमा पाइदैन । त्यसको लागि पैसा चाहिन्छ । अब त्यसको निमित्त के गर्ने ? उसले भुईंबाट एउटा ढुंगा टिपेर एउटा हात भाँच्छ । त्यसपछि अर्को हात पनि भाँच्छ । भोलिपल्ट राजाका सेना आउँछ । आउँदा हात भाँचिएको देख्छ । यस्तो मान्छेलाई सेनामा लाने कुरा भएन यसले बन्धुकनै समाउँदैन । सेनाले त्यतिकै छोडेर गएछ । ८३ बर्षको मान्छेले मेरा एक सहयोगिलाई सुनाएको काथाबाट थाहा हुन्छ की चिनियाहरु कति जीवनमुखि छन् ? यसबाट हामीले बुझ्नुपर्छ चीनीया चरित्रको पछाडि के छ ? त्यसमा हामीले पत्ता लागउनु पर्छ ।
चिनिहरुको ठुलो सम्पत्ति भनेको सामुहिक पर्यत्न हो । हामी के भन्छौं ? अहम ब्रह्मा श्री उनीहरु संगम शरणम् गच्छामी भन्छन् । त्यहि फरक छ । हामी गितामा श्रीकृष्णले भनेका भनाइलाई सार लिन्छौं । जब पृथ्वीमा पाप बढ्दै जान्छ, त्यस पछि म आउने छु । सारा अर्धमबाट मुक्त गरी धर्मको स्थापना गर्छु । पश्चिामाहरुमा त्यो भन्छ नि ? इस्पाइडर म्यान भन्छ क्यारे । त्यो कति अलौकि छ । चिनियाहरु कुम्फुमा विश्वास गर्छन । हेर्दा कति सरल छ । कति सिम्पल छ । यसले के जानेको छ ? जस्तो लाग्छ । त्यसमा अथाह पावर छ । हामी चाइनिजलाई यसले के जानका छन् भन्छौं । आफुलाई सर्वज्ञान सम्पन्न ठान्छन् । उनीहरु सामुहिकतामा विश्वास गर्दछ । तपाईको त्यो आफु के–के न हुँ भन्ने दम्भ छनि त्यसले केहि गर्दैन । हेर्दाखेरी लाटो बुजु्रक जस्तो लाग्छ ।
यस अर्थमा चिनियाहरु सिजिङपिङ थटमा लागि परेका छन् । पिपुल डेम्लभमेन्ट थट भन्छन नि ? पहिला जनताको क्रयशक्ति वृद्धि गर्ने । गरिबी घटाउने भन्ने छ । चीनमा अहिले एक करोड जनता गरिबीको रेखामुनि छ । त्यसलाई यसैबर्षभित्र खतम गर्नेमा लागेका छन् । चिनियाले ८० को दशकमा जुन किसिमको जिडिपी थियो । सन् २०२० सम्मको जिडिपि लक्ष्य पुरा गरिसकेको छ । चीनीयाहरुको लक्ष्य मनगणन्ते छैन । उनीहरु जुन लक्ष्य राख्छन् त्यसलाई पुरा गर्न मिहिनेत गर्छन ।
हाम्रोमा कुनै पनि योजनामाथि विश्लेषण हुँदैन । एकैपटक योजना पेस गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा जान्छ । त्यसमा स्रोतले धान्छ कि धान्दैन ? निर्धारित समयमा सकिन्छ सकिदैन ? हाम्रो क्षमताले धान्छ कि धान्दैन ? कुनै लेखाजोखा हुँदेन । यो हाम्रो दुर्भाग्य हो । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं । तुलनात्मक विचारहरुको अभाव नै समस्या जस्तो लाग्छ ।
बि आर आइ के हो ?
तर, हामीलाई यो वीचमा के भनिदेै छ भने चीनबाट सामान आउन अप्ठ्यारो छ । टाढा छ । बढि कस्ट लाग्छ । पैसा पनि तिर्नु पर्छ । बरु हामीसंग जुत्ता छ । खुट्टाचाहि काट्नु पर्छ है । भन्ने किसिमले परामर्श दिन आइसकेका छन् । पैसा नतिरीकन तेरो घरसम्म सामान ल्याइदिन्छौं । चाइना किन जान पर्यो भनेर परामर्श दिन थालेका छन् । तर यसमा के बुझ्नु पर्छ भने यो विषय भनेको अलक अलक पक्ष हो । अलक अलक पाक्षबाट आफ्नो पोजिसन लिन हामी सक्षम छौ.। अब हामी त्यति हुस्सु छैनौं । हामी नाकाबन्दी जस्तो अप्ठ्यारा परिस्थितिमा पनि पछि नहटेको मानिस हौं ।
(जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि पूर्व राजदुत टंक कार्कीले राजधानीको एक अन्तर्किया कार्यक्रमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)